DEG DEG: Deni, Waare iyo Lafta-Gareen oo kulan deg deg leh, soona saaraya. – Puntlandtimes
DEG DEG: Deni, Waare iyo Lafta-Gareen oo kulan deg deg leh, soona saaraya.
May 12, 2019 W LAASCAANO
GAROOWE(P-TIMES)- Wararka naga soo gaaraya magaalada Garoowe ee caasumada Puntland ayaa sheegaya in uu kulan adag u socdo Madaxweynayaasha Puntland, HIRSHABELLE Iyo Koonfur Galbeed, kaas oo kasocda Xarunta wasaaradda Maaliyadda ee Garoowe.
Wararka ayaa sheegaya in ay dhinacyadu kawada hadlayaan xaaladdaha ka aloosan siyaasadda Soomaaliya, ayna suuragal tahay in ay soo saaraan war ay kumideysan yihiin.
Xog ay hashay Puntlandtimes.com waxay daaha ka rogaysaa in ay xalay dhaceen kulamo adag oo siyaasadeed, si gaar ahna u dhexmaray Madaxda Puntland iyo Madaxweyne Farmaajo.
Puntland ayay suuragal tahay in ay wax badan ka heshay kulanka Garoowe, taas oo ah danaheeda khaaska ah, gaar ahaana dhanka Mashaariicda.
Sida muukhata ama la sheego nimanka maamula dawlada dhexe waxba uma ogola maamul gobaleedyad illaa ay qaataan waxay ayagu u yeeriyaan mooyaane.Saas baa la sheegaa.Wayna u egtahay in ay taasi run tahay.
Tan kale shaki kuma jiro in uusan maamulka federaalka ah ee xamar ka jiraa uusan raali ka ahayn nidaamkii ay soomaaliweeyn ku heshiisay 14 sano ka hor.Maadaama ay xamar diiday federaal kolba reer puntlaan uma cadda waxaan federaal ahayn.Waayo xamar oo ahaan jirtey magaalo soomaali oo dhan ka dhaxayn jirtey waa lagu kala guuray oo dad gaara baa leh anagaa gooni u leh.Dee qaata nagala taga.Hase ahaatee reer puntlaan wali way ka rajo qabaan Insha Allaah in mar la soo nabad celiyo qarankii soomaaliweeyn ee xamar lagu QASHAY.